1 Okwu e kwuru megide Ninive:+ Akwụkwọ ọhụụ nke Nehọm, onye Elkọsh:
2 Jehova bụ Chineke nke chọrọ ofufe a na-ekewaghị ekewa,+ bụrụkwa onye na-abọ ọbọ; Jehova na-abọ ọbọ,+ na-ewekwa iwe.+ Jehova ga-abọ ọbọ n’ahụ́ ndị iro+ ya, ọ na-eweso ndị iro+ ya iwe.
3 Jehova adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ,+ ike+ ya dịkwa ukwuu, Jehova agaghịkwa ala azụ ma ọlị n’inye ntaramahụhụ.+
N’ifufe na-ebibi ihe nakwa n’oké ifufe mmiri ka ụzọ ya dị, ígwé ojii dịkwa ka uzuzu nke ụkwụ+ ya bọliri.
4 Ọ na-abara oké osimiri+ mba, ọ na-emekwa ka ọ taa; ọ na-eme ka osimiri niile taa.+
Beshan na Kamel akpọnwụwo,+ okooko Lebanọn akpọnwụwokwa.
5 Ugwu ukwu amawo jijiji n’ihi ya, ugwu nta na-agbazekwa.+
Ụwa ga-eme mkpatụ n’ihi ihu ya; elu ala na ndị niile bi+ na ya ga-emekwa mkpatụ.
6 Mgbe ọ na-awụpụ iwe ya,* ònye pụrụ iguzo?+ Ònyekwa pụrụ iguzogide ọnụma+ ya dị ọkụ?
A ga-awụpụ ọnụma ya dị ka ọkụ,+ a ga-akwatusịkwa oké nkume n’ihi ya.
7 Jehova dị mma,+ ọ bụ ebe e wusiri ike+ n’ụbọchị ahụhụ.+
Ọ makwaara ndị na-agbaba n’ime ya.+
8 Ọ ga-eji idei mmiri nke na-asọ asọ kpochapụ obodo+ ya, ọchịchịrị ga-achụ ndị iro+ ya ọsọ.
9 Gịnị ka unu ga-echepụta megide Jehova?+ Ọ na-eweta mbibi zuru ezu.
Ahụhụ agaghị ebilite nke ugboro abụọ+ ya.
10 Ọ bụ ezie na ha na-agbakụ onwe ha dị ka ogwu+, mmanya ana-egbukwa ha dị ka hà ṅụbigara mmanya ọka wit+ ókè, a ga-erechapụ ha dị ka ahịhịa ọka kpọrọ nkụ+ nke ọma.
11 N’ime gị ka onye na-echepụta ihe ọjọọ+ megide Jehova ga-esi pụta, bụ́ onye na-eme atụmatụ na-abaghị uru.+
12 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ọ bụ ezie na ha nwezuru ihe niile, e nwekwara ọtụtụ ndị dị otú ahụ, otú ahụ ka ha ga-adị e gbutuo+ ha; a ga-agabigakwa n’etiti ha. M ga-emekpa gị ahụ́, nke na agaghị m emekpa gị ahụ́ ọzọ.+
13 M ga-agbaji osisi o ji ebu ihe nke dị n’ubu gị,+ ọ bụkwa agbụ e kere gị ka m ga-adọbi abụọ.+
14 Jehova enyewo iwu banyere gị, sị, ‘Aha gị agaghị amị mkpụrụ ọzọ.+ M ga-ebipụ ihe oyiyi+ a pịrị apị na ihe oyiyi a wụrụ awụ n’ụlọ chi gị niile. M ga-akwadebe ebe a ga-eli gị,+ n’ihi na o nweghị uru ị bara.’
15 “Lee! N’elu ugwu ka ụkwụ onye na-eweta ozi ọma, bụ́ onye na-ekwusa udo,+ guzo. Juda, mee ememme+ gị dị iche iche. Kwụọ ihe i kwere ná nkwa;+ n’ihi na onye na-abaghị n’ihe agaghị esi na gị+ gafere ọzọ. A ga-ebipụ+ ya kpamkpam.”
^ Ne 1:6*
Ma ọ bụ, “Mgbe ọ na-ekwupụta amamikpe ya.”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D34%26Chapter%3D1%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl